« Ity ve ilay Gisa mainty ? », hoy ny mpandalo. Tsikaritra mantsy fa niara-dia taminy tetsy Ambohidahy ny ankamaroan’ireo mpilalao sarimihetsiky ny orinasa namokatra ilay horonantsary “Gisa mainty” sy ny mpanatontosa. Tonga ny fotoana, hoy ny kandida Faniry Ernaivo, hitondrana fanovana eto amin’ny firenena. Ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly, ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary ny fampandrosoana ny lafiny toekarena raha bangoina no vinan’ity kandida ity. Manomboka eto izahay dia afaka miditra amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Tsy misy lalàna mametra izany saingy tsy hivaona amin’ny lalàna izahay, hoy hatrany i Faniry Ernaivo. Tombony ho azy mitaha amin’ny hafa, hoy ny tenany, dia olom-baovao aho, vitsy ny kandida vehivavy ary efa nanome porofo fa vonona ny hiady amin’ny kolikoly sy ny fanjakana tsy tan-dalàna na dia tsy nanao politika aza.